Ugu Weyn Ee Avast
Isbarbardhigga antiviruses Avira iyo Avast
Doorashada antivirus waa in had iyo jeer loola dhaqmaa masuuliyad weyn, sababtoo ah ammaankaaga kombiyuutarkaaga iyo macluumaadka qarsoodiga ah waxay ku xiran tahay. Si aad si buuxda u ilaaliso nidaamka, mar dambe lagama maarmaan u ah inaad iibsato antivirus lacag ah, maaddaama lamaanayaasha bilaashka ah ay si guul leh ula qabsanayaan hawsha.
Dhibaatooyinka ku xiraya Avast Antivirus: helitaanka xal
Barnaamijka "Avast" waxaa loo aqoonsan yahay hogaamiyaha qalabka antivirus lacag la'aan ah. Laakiin, nasiib daro, dadka isticmaala qaarkood waxay qabaan dhibaatooyin ku rakibidda. Aan ogaanno waxa la samaynayo marka aan la xirin Avast? Haddii aad tahay qof bilaw u ah oo aanad aqoon u lahayn dhammaan qalabka korontada noocan oo kale ah, markaa waxaa laga yaabaa in aad samaynayso wax qalad ah marka aad barnaamijka dejineyso.
Ku darista ka reebista antivirus antivirus antivirus
Dhaqdhaqaaq been ah ama xannibaadda barnaamijyada lagama maarmaanka ah iyo bogagga shabakadu waa dhibaatada ku dhowaad dhammaan antiviruses. Laakiin, nasiib wanaag, sababtoo ah joogitaanka hawlaha lagu daro marka laga reebo, caqabadan waa la gudbi karaa. Barnaamijyada liiska iyo cinwaanada webka lagama horjoogi doono antivirus. Aynu ogaano sida loo kordhiyo faylka iyo cinwaanka websaydhka Avast Antivirus.
Dhibaatooyinka la bilaabayo Avast Antivirus: sababaha iyo xalalka
Barnaamijka "Avast" waa mid u qalma barnaamijka antivirus oo bilaash ah midka ugu wanaagsan oo ugu xasiloon. Si kastaba ha noqotee, dhibaatooyinka ayaa sidoo kale ku dhaca hawsheeda. Waxaa jira kiis marka arjiga si fudud uusan u bilaabmin. Aynu ogaano sida loo xallinayo dhibaatadan. Dhibista shaashadaha ilaalinta Mid ka mid ah sababaha ugu badan ee looga hortago difaaca Avast anti-virus waa inuu joojiyo hal ama dhowr shaashadood ee barnaamijka.
Cusbooneysiinta diiwaangelinta bilaashka ah ee bilaashka ah: xalinta dhibaatooyinka siyaabo kala duwan
Ugu horreyntii, shirkadda Avast waxay joojisay diiwaangelinta qasabka ah ee loogu talagalay dadka isticmaala antivirus Avast Free Antivirus 2016, sida lagu dhaqmo qaababka hore ee adeegga. Hase yeeshee, muddo aan horey loo diiwaangelin ayaa dib loo soo celiyey. Hadda, si buuxda u isticmaalka antivirus sanadkii mar, dadka isticmaala waa inay maraan nidaamkan.
Dib u soo celinta Faylasha Antivirus Avastirus
Mararka qaarkood waxaa jira kiisas antiviruses ay leeyihiin wax been abuur ah, waxayna tirtiraan feylo aad u adag. Dhibaatada nuska ah haddii madadaalo ama content aan muuqaal lahayn ay noqdaan meel fog, laakiin waxa dhacaya haddii antivirus laga tirtiro diiwaan muhiim ah ama faylka nidaamka? Aynu ogaano waxa la sameeyo haddii Avast laga tirtiro faylka, iyo sida loo soo celiyo.
Goobta karantiilka ee antivirus avast ah
Inta badan, marka waxqabadyo la mid ah fayruska la ogaado, antivirus wuxuu u diraa feylal shaki si uu u karantiilo. Laakiin ma aha isticmaal kasta oo ogaanaya halka uu meeshan ku yaal, iyo waxa uu yahay. Karantiilku waa qormo difaac ah oo ku saabsan sheyga adag halkaas oo fayraska wareejinta fayraska iyo faylasha laga shakiyo, waxaana lagu kaydiyaa foomka la isku duubay, iyada oo aan khatar gelin nidaamka.
Uninstall browser ka Avast SafeZone Browser
Avast Avast SafeZone Diiwaanka dhejiska ee shabakada dhijitaalka ah ayaa ah qalab aan loo baahnayn oo loogu talagalay dadka qiimeeynaya asturnaantooda ama inta badan lacag bixinta internetka. Laakiin inta badan dadka kale isticmaala daalacayaasha caanka ah ee loogu talagalay falanqaynta maalin kasta ee internetka, waxa kaliya ee aan loo baahnayn in lagu daro antivirus loo yaqaan.
Ku rakib antivirus software Avast Free Antivirus
Nasiib darro, barnaamijyada antivirus lagu kalsoon yahay ayaa la bixiyaa. Ka-reebitaan wanaagsan oo ku saabsan arrintani waa Avast antivirus, oo ah nooca bilaashka ah ee Avast Free Antivirus, maaha wax badan oo ka danbeeya qaybaha bixinta codsigan marka la eego ficil ahaan, guud ahaanna maaha mid ka yaryar sugnaanta.
Isbarbardhiga antiviruses Avast Free Antivirus iyo Kaspersky Free
Waxay muddo dheer ku doodi jirtay dadka isticmaala barnaamijyada ka hortagga fayruusyada jira ee ugu fiican taariikhda. Laakiin, halkan ma aha oo kaliya arrin xiiso leh, sababtoo ah su'aal muhiim ah ayaa ka jirta dareenka - ka ilaalinta nidaamka fayruusyada iyo kuwa soo weerara. Aynu isbarbardhigo Avast Free Antivirus iyo xalalka kale ee antivirus ee Kaspersky lacag la'aan ah, oo go'aan ka gaaraan midka ugu wanaagsan.
Dami Avast Antivirus
Si sax ah loogu rakibo barnaamijyada qaar, mararka qaarkood waa lagama maarmaan in la joojiyo antivirus. Nasiib darro, ma aha in dhammaan isticmaalayaashu ay yaqaanaan sida loo demiyo antivirus, maadaama shaqadii xidhitaanka aan lagu hirgelin horumarinta heerarka macquulka ah ee macaamiisha. Waxaa intaa dheer, dadka intooda badan waxay raadiyaan badhanka xidhitaanka ee dhexdhexaadinta userka, laakiin ma helayaan, maadaama bamkaan uusan jirin.
Waxa la sameeyo haddii Avast aan la saarin
Waxaa jira kiisas marka aysan suurtagal ahayn in laga saaro antivirus Avast si caadi ah. Tani waxay ku dhici kartaa sababo kala duwan, tusaale ahaan, haddii faylka uninstaller uu waxyeelo ama la tirtiro. Laakiin ka hor inta aanad u dirin xirfadlayaasha leh codsiga: "Caawin, Anigu kama saari karo Avast!", Waxaad isku dayi kartaa inaad hagaajisid xaaladdaada gacantaada.
Ka saar barnaamijka antivirus Barnaamijka "Avast Free Antivirus"
Ku rakibidda barnaamijyada antivirus, xaaladaha badankood, sababo macquul ah oo macquul ah iyo geeddi-socodka mug leh, ma fududa, laakiin marka laga saaro codsiyada noocaas ah, dhibaatooyin waaweyn ayaa soo bixi kara. Sida aad ogtahay, fayrasku wuxuu ka baxaa raadadka uu ku jiro nidaamka asaasiga ah ee nidaamka, diiwaanka, iyo meelo badan oo kale, iyo in si qaldan looga saaro barnaamijka muhiimadaas oo kale waxay saameyn xun ku yeelan kartaa hawlgalka kombiyuutarka.
https://termotools.com so.termotools.com © Avast 2020